Sida loo Download PBS Videos la One Click e
> Resource > Video > Sidee aad kala bixi karto PBS Videos u Radidiyaha
Tan iyo markii aad halkan ku sugan yihiin, waxaa laga yaabaa inaadan aqoon PBS noqon. Waa muddo gaaban u Broadcasting Public Service, taas oo ah bixiyaha weyn content barnaamijyada television ee dalka Mareykanka, oo ay ku jiraan dhacdo buuxa muujinaya TV iyo kuwa kale. Iyadoo ku riyaaqayaa hoorto videos ay website, waxaa jira fursad aad jeceshahay waxaa laga yaabaa inaad kala soo baxdo oo ay daawadaan PBS videos on kombuyuutarrada gacanta marka la xiriira internet-ka aan la heli karin. Sidee baad ku gaari kartaa in? Ha welwelin. Halkan waa xal macquul ah. The Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) kala soo bixi kartaa oo dhan videos ka PBS oo xitaa kuu ogolaanaysa inaad iyaga loogu badalo in ay qaabab kale si ay u ciyaaro aaladaha aad la qaadi karo, sida iPad, iPhone iyo wax ka badan. Bal aynu eegno sida ay u hoos ku shaqaysaa.
Marka hore kala soo bixi barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer. Xasuuso inaad doorato nooca saxda ah ee aad PC ama Mac. Oo annaguna waxaannu kugu qaadan doontaa version Windows sida tusaale ku sugan qodobadiisa ka dib tan iyo markii labadii shaqeeyo isku mid.
Tag website PBS ee si aad u ogaato videos aad iyo iyaga guji inuu u ciyaaro. Mid ka mid ah wax in la xasuusto waa inuu u ciyaaro videos on mid ka mid ah daalacashada soo socda: IE, Firefox iyo Chrome si videos ah waxaa lagu ogaan karaa barnaamijka.
2 Download videos ka PBS
Marka video la ciyaaro, oo aad ka heli kartaa Download button Midigta sare ee shaashadda video ah. Riix badhanka iyo barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi video ah.
Hab kale oo lagu soo bixi videos waa in aad nuqulka URLs iyo riix URL paste button aad u bilowdo hawsha.
Marka videos waxaa lagala soo bixi, waxaad ka heli kartaa ka soo bixi tab. Double guji videos uu ugu ciyaari karo kombiyuutarka. Laakiin haddii aad rabto inuu u ciyaaro videos ku kombuyuutarrada gacanta aad, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo videos ugu horeysay. Guji ka badalo button on xaq ah wax video ah oo ay doortaan qaab ah in aad rabto. Riix OK u bilowdo nidaamka soo celiyaa.
Fiiro gaar ah: Haddii barnaamijkan soo bixi PBS videos ku guuldareysto ay sabab u tahay xasilooni ah ee la xiriira internet-ka, waxaad isticmaali kartaa shaqo duubo lahayd.
Fudud, miyaanay ahayn? Waxaad isticmaali kartaa tan PBS video downloader inaad kala soo baxdo sida badan videos intii suurto gal ah. Waxa kale oo kala soo bixi kartaa videos ka goobood oo kale oo badan sida YouTube, vimeo, Dailymotion iyo wax ka badan. Just download mid si uu u siiyo isku day ah. Waxaad sii socotay inay u jeclahay.